သက်ဝေ: အိပ်မက်ပိုင်ရှင်... သူ
Thandar Lwin December 26, 2010 at 8:43 PM
အမသက်ဝေ.... ခံစားတတ်ေ၇းတတ်လိုက်တာနော်။
Sunny December 26, 2010 at 9:01 PM
အိပ်မက်ကို ပြန်မပြောပြဘဲ နေဖို့ဆိုတာ တော်တော်ခက်မှာပဲ..
ဖတ်ပြီးတော့ ခံစားရလို့ ဘာပြောရမလဲတောင် မသိတော့ဘူး..
သက်ဝေ December 26, 2010 at 9:35 PM
Khin Min Zaw : ကိုယ့်ဆီက အိပ်မက်ကို ပြောခွင့်ရသလို သူ့အိပ်မက်တွေကိုလဲ သိခွင့်ရသူ ဖြစ်ချင်ခဲ့ဘူးတယ်... ဟိုးးးးးး ရှေးရှေးတုန်းက........
ဖြူ December 26, 2010 at 10:00 PM
ဝတ္တုလေးက သိတ်လှတာပဲ သက်ဝေ...
တကယ်ဆို တချို့ဟာတွေက မပြောပဲ ထားတာပဲ ကောင်းပါတယ်။ နာကျင်တာတွေကိုတော့ ခဏ မေ့ထားကြတာပေါ့။
ညီမလေး December 26, 2010 at 10:16 PM
အဲ့လိုအိပ်မက်တွေတော့ မမက်ချင်ဘူး မမသက်ဝေရယ် ... ပြောပြခွင့်မရတဲ့ အိပ်မက်တွေ ၊ စကားသံတွေကို ညီမလေးမုန်းတယ် ။
ခွန်မြလှိုင် December 26, 2010 at 11:43 PM
အိပ်မက် တခုတည်းကို တညတည်း တူတူ မက်ကြလို့ မနက်မိုးလင်းတော့ အလုအယက် ပြန်ပြောကြရင်း အတူ အံ့သြခဲ့ ကြတဲ့ သူငယ်ချင်း ၃ယောက်ကို သတိရ သွားတယ်။ အိပ်မက်ကို တယောက်တပိုင်းစီ ပြောတာ တောင် အဲဒီအိပ်မက်တွေက တထပ်တည်း ကျနေတာ ပြီးတော့ အပြင်မှာပါ မှန်နေတာ သိပ် အံ့သြဖို့ ကောင်းတာပဲ။ ခုတော့ သူတို့တွေနဲ့ အိပ်မက် တွေအကြောင်း ပြောခွင့် မရှိတော့ပါဘူးလေ...
ယုန်ကလေး၏ ဒိုင်ယာရီ December 26, 2010 at 11:51 PM
လာဖတ်သွားပါတယ် အမ...။ ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ပြီး ကျနော်လည်း မပြောဖြစ်သေးတဲ့ အိပ်မက်လေးရယ်...မြိုသိပ်နိုင်လွန်းတဲ့ လူတယောက်ရယ်ကို သွားသတိရတယ်။
ဆောင်းနှင်းရွက် December 27, 2010 at 12:05 AM
၀င်လည်ရင်း ဖတ်သွားတယ် ...း)
Hmoo December 27, 2010 at 4:34 AM
rose December 27, 2010 at 4:45 AM
မမသက်ဝေရဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးကို လာဖတ်ပါတယ်။ အဲဒီထဲက မိန်းကလေးက သနားပါတယ်နော်။ သူမ ချစ်နေတဲ့သူက မျိုသိပ်နိုင်လွန်း၊ သူငယ်ချင်း စည်း စောင့်နိုင်လွန်းတော့လည်း သူမ ချစ်နေတာတွေ ရင်ထဲမှာပဲ သိမ်းထားရတော့မှာပေါ့။
တန်ခူး December 27, 2010 at 6:46 AM
Thetwai yay, i really miss ur writing when i was away from blog... Dream... Is Dream reflection of our mind... I really dont know... Anyway... I love to Dream but at the same time i scare to dream.... (sorry for english comment... I'm testing the way to in touch with blog.. 8-) )
Vista December 27, 2010 at 12:16 PM
Anonymous December 28, 2010 at 12:15 AM
rose of sharon December 28, 2010 at 2:47 PM
အင်းနော်... ပြန်ပြောပြလို့မရမဲ့ အိမ်မက်မျိုး ဘယ်သူမက်ချင်ပါ့မလဲ
ငွေစန္ဒာ December 29, 2010 at 11:27 PM
Ko Kyaw Oo December 17, 2015 at 4:56 PM
သ ည် လို သ စ် ရွ က် စိ မ်းစိုလေးေ တွ ကိုတွေ့ ပြ န်တော့
သူ့ ကို သ တိ ရ မိ သ ည် . . . . . . . )))